Otu esi eme ka otutu ihe nke AdWords Conversion Reporting | Martech Zone
Enyemaka Mgbasa Ozi Google
Kedu nke ị ga-ahọrọ: mgbasa ozi dijitalụ a na-adọrọ adọrọ nke na-adọta nleta weebụsaịtị 1,000? Ma ọ bụ onye na-eme nwayọ nke a na-enweta naanị pịa 12 ruo ugbu a?
Ọ bụ a aghụghọ ajụjụ. Azịza ya abughi.
Ma ọ dịghị ihe ọzọ, ruo mgbe ị matara mmadụ ole n'ime ndị ọbịa ahụ gbanwere.
Mgbasa ozi ezubere iche ga-akpata omume iri na abụọ ruru eru ga-aba okpukpu iri karịa nke na-adọta ọtụtụ narị ndị ọbịa erughị eru na-agbanweghị. N'ime ụwa ebe pịa ọ bụla na-efu ego, mgbanwe bụ isi. A sị ka e kwuwe, olee uru ịkwụ ụgwọ maka mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ọ naghị ebute okporo ụzọ ruru eru nke nwere ike iwebata ụfọdụ ego na nloghachi?
Nke ahụ bụ uche n’azụ mgbanwe ọhụrụ Google na AdWords onye na-ede akwụkwọ ndekọ na ndetu. Ọhụrụ ogidi nsuso ogidi nye ndị ahịa ohere ịchịkwa etu esi egosipụta data ka ị wee hụ ihe na-arụ ọrụ.
Gịnị na-agbanwe na AdWords Conversion Reporting?
A ọhụrụ Mgbanwe kọlụm na-edochi Ntughari maka njikarịcha. Ọhụrụ a na kọlụm na-egosiputa data niile akakabarede omume na njikarịcha ọnọdụ setịpụrụ “na.”
Ka ọ dịgodị, ihe Mgbanwe niile kọlụm na-edochi Atụmatụ na ngụkọta mgbanwe. Kọlụm a na-egosi data maka niile mgbanwe - ma ị gbanweela njikarịcha on or anya.
Kedu ihe mgbanwe mgbanwe mgbanwe AdWords na-egosi gị?
Ọ bụrụ n’ị hụ nnukwu mgbanwe na ntụgharị AdWords gị, atụla ụjọ. Eleghị anya ị ga - eme mgbanwe ole na ole ka akụkọ gị kwekọọ na nkọwa mgbanwe Google nke mgbanwe. Nke a ga - eme ka ọ dịkwuo mfe itinye uche na mgbanwe macro nke na - akpata ego azụmaahịa gị.
Mgbanwe ntụgharị akuko ga-eme na akpaghị aka, mana enwere usoro ole na ole ị kwesịrị ị ga - eme iji hụ na ewepụtara data gị n'ụzọ dị mma na enweghị ntụpọ:
Gbanwee ntọala gị maka macro na obere mgbanwe
Ọ bụrụ na i nwebeghị, chọpụta kpọmkwem ihe dị mkpa dịka nnukwu ntụgharị maka azụmahịa gị. Ihe ndị a na-emetụta ụlọ ọrụ gị na-akpata ego ma na-emetụta ihe ịzụrụ ma ọ bụ ebumnuche ịzụta. Ndenye ụgwọ akwụ ụgwọ, ntinye aka na nnwale n'efu yana arịrịọ ngosi nwere ike ịgụta dị ka nnukwu mgbanwe.
Iji hụ na mgbanwe ndị ahụ na-eweta ego na-egosi na ha ziri ezi Mgbanwe kọlụm, lelee nke ọ bụla iji jide n'aka na edoziri ya ka ọ bụrụ nke kachasị: Họrọ ntughari ịchọrọ idezi, wee pịa Dezie ntọala> Njikarịcha ma hụ na ọ tọziri ya on.
N'otu aka ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-atụgharị njikarịcha ọnọdụ maka ihe ọ bụla Micro ntụgharị - dịka ịdebanye aha maka akwụkwọ akụkọ email ma ọ bụ soro gị na mgbasa ozi. Ntụgharị ndị a ka ga-akọ, yana nnukwu ntụgharị niile, na Mgbanwe niile kọlụm.
Ọ bụrụ na ị zọpụtara nzacha amaokwu ahụ ma ọ bụ jiri mgbanwe iji mee atụmatụ, lelee iji hụ na ndị a ka na-arụ ọrụ nke ọma. Iji maa atụ: Ọ bụrụ n’itinyela ụfọdụ micro mgbanwe anya,, ị nwere ike ịgbanwe nza iji jiri kọlụm ọhụrụ bụ “Ntugharị” yabụ enweghị nkwụsịtụ na mkpesa.
Melite akpaaka iwu.
Ọ bụrụ na ị na-eji akpaaka iwu or omenala ogidi iji nyochaa mgbanwe, nyochaa ma melite ntọala gị iji hụ na ha nọgidere na-arụ ọrụ dị ka atụ anya ya. Ozo, ichoro iji ihe ohuru Mgbanwe kọlụm iji hụ na iwu ndị a na-agwa gị mgbe mgbasa ozi na-emetụta akara ala azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-eji ederede iji gbanye ọrụ ndị na-eme oge, ị ga-achọ ịlele koodu ahụ ma hụ na ihe ọ bụla a na-akpọ akakabarede emelitere iji gosiputa mgbanwe.
Na ichikota: Mgbanwe ohuru nke Google na mkpesa AdWords ga-eme ka ọ dịrị ya mfe ịgbaso data kachasị mkpa azụmahịa gị. Ihe ikwesiri ime bu ime otutu uzo ngwa ngwa iji mee ka ogidi gi, ihe nzacha na iwu ahaziri iji gosiputa mgbanwe.
Tags: adwords akpaghị aka iwuadwords mgbanweadwords nzachagoogle adwords
Nov 5, 2015 na 6:45 AM
Daalụ maka mmelite ahụ Amanda. Ọtụtụ ga-ahụ nke a bara uru. Zọ ọzọ iji jigide mgbanwe na Google Adwords na nyiwe nyocha weebụ ndị ọzọ bụ ịchọta ngwa adtech nwere ike ijikọ ha na http://www.TapAnalytics.com nwere ike ime nke ahụ.